Isiokwu na-arụ ọrụ
Hyddị Hydraulic Egwuregwu
Isiokwu Ubi Ọrụ
Imirikiti mba na mpaghara ụwa dị n'oge udo, mana enwere esemokwu pere mpe n'etiti mba ole na ole. Dịka ọmụmaatụ, agha Palestine na Israel na nso nso a. Maka ụlọ ọgwụ ndị agha na mpaghara ndị agha, achọrọ ngwa ọrụ ahụike dị mfe. Ndị agha dị ezigbo njọ ...
Mgbe ndị ahịa si mba ọzọ na-asị na m azụtabeghị ọkụ ọrụ gị, a ga-atụkwasị obi na ogo ya? Ma ọ bụ ị nọrọ m n’ebe dị anya. Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enwere nsogbu? Ahịa niile, n'oge a, ga-agwa gị na ngwaahịa anyị kacha mma. Ma ì kwere ha n'ezie? Dị ka professio ...
Nweta nkwalite nke ngwa agha
Ngwaahịa, naanị site na nkwalite mgbe niile, ndị ahịa nwere ike ịnwe ahụmịhe kachasị mma. Site na nzaghachi onye ọrụ na iwebata teknụzụ ọhụụ, anyị kwalitere ogwe aka agbatị (ogwe aka ma ọ bụ ogwe aka) nke ụlọ na-arụ ọrụ ọkụ. ...